दुई वटा वाणिज्य बैंकमा ३० जनाका लागि रोजगारीको अवसर ! – Banking Khabar
दुई वटा वाणिज्य बैंकमा ३० जनाका लागि रोजगारीको अवसर !
एनआईसी एसिया बैंक र सिद्धार्थ बैंकले कर्मचारी माग गरेका छन् । एसआईसी एसिया बैंकले एक जना क्रेडिट अफिसर मागेको छ, जसका लागि एप्लाई गर्ने म्याद बुधबार सकिँदैछ । त्यस्तै, सिद्धार्थ बैंकले २९ जना कर्मचारी विभिन्न पदका लागि मागेको छ भने एप्लाई गर्ने म्याद पुस २६ गतेसम्म छ ।
एनआईसी एसिया बैंकले क्रेडिट अफिसर माग गरेको छ । नेपालको कुनै पनि ठाउँमा गएर जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार नेपाली नागरिकले ४ जनवरी अर्थात् पुस २० गतेभित्र बैंकमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । साथमा स्नातकोत्तर उतीर्ण गरेको र कम्तीमा ३ वर्ष ( २ वर्ष रिलेसनसिप, क्रेडिट, क्रेडिट रिस्क मेनेजमेन्ट, क्रेडिट अप्रुभल र क्रेडिट एनालाइसिससम्बन्धी) काम गरेको अनुभव भएको हुनुपर्ने बैंकले जनाएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले माइक्रोबैंकिङ प्रमुख १ जना, सिनियर अफिसर लेभलका लागि १ जना, उपत्यकाबाहिरका लागि एसिस्टेन्ट लेभलमा २५ जना र अफिसर लेभलमा २ जनाको दरखास्त आह्वान गरेको छ ।